Airbus A320 Family Mega Pack FSX & P3D Inguqulo 3.05
Usayizi 733 MB
Play 562 084
Umbhali: I-Project Airbus kanye nabambisene bayo, uFrançois Doré, baphinde baphinde babhekwe nguLuis Quintero, izibuyekezo zikaRiooooo http://fsxluchoals.blogspot.com/
Kubuyekeziwe on 10 / 03 / 2018: Fixed isibonakaliso esingalungile of flaps in cockpit virtual kanye ukuguqulwa gauges (wadala Tomi Koivunen "project_airbus_modification.zip"). Yengeze i-gauge ye-Jacob Larsen V-Speed ​​(ukulinganisa okuzenzakalelayo kwe-V1, i-V2, ne-V3) ngokukhulumisana ngomlomo. Yengeze iphaneli ye "Flight Data" (eyakhiwe nguHans Zuidervaart) eyenza sikwazi ukuvula iminyango nemithwalo yemithwalo ngokuchofoza okulula, futhi yenza kube lula ukwandisa isivinini sokufanisa futhi unikeza ulwazi olujwayelekile ngendiza kanye nesimo izindiza. Ingeziwe iphaneli evumela ukusebenza okuzenzakalelayo kwe-Pushback kanye nemisindo (eyakhiwe nguRob Barendregt "rcbgh-50.zip")
Kubuyekeziwe on 05 / 09 / 2017: Inguqulo ye-Auto-installer 10, manje ihambisana ne-Prepar3D v4 (ihlolwe), isibuyekezo se-dsd_fsx_xml_sound ne-dsd_p3d_xml_sound_x64 ku-version 5.2.5 (Ukusebenza ngokufaka isicelo ku-P3D v4)
Nasi iphasela le-mega le-Airbus A320 Family elinokulungiswa kwe-145 yekhwalithi ephezulu. Leli phakethe liqukethe yonke i-Airbus yomndeni we-A320 (amamodeli amane) nemisindo engokwezifiso ezifana ne-CFM56 ne-International Aero Engines V2500.
Kufaka imodeli ngayinye i-cockpit yangempela (VC) ne uhlelo olukhethekile lwe-V3 (3.05) likaFrançois Doré, okuthuthukisa kakhulu ubuqiniso (kubalulekile ukufunda ibhukwana ngesiNgisi noma ngesiFulentshi).
Kufaka iphakethe le-BLUE LED elikhanyisa i-cockpit yakho ebonakalayo ene-LEDs eluhlaza okwesibhakabhaka.
Kufaka phakathi i-GPWS, i-AUTOFLARE, njll kanye nezinqwaba zokubukwa kwendabuko ngamakhodi we-jetway ne-cargo yokulungiswa ngalunye. Imidwebo ye-VC ishintshwe ku-HD.
OKUBALULEKILE:I-airbus ivela ngaphakathi I-cold & dark imodi (izinjini nezinsimbi zisusiwe). Funda ibhuku eliphelele lomsebenzisi likaFrançois Doré, elifaka phakathi ukwazi indlela yokuqalisa nge-Bleeds, umbhali uvumela umsebenzi we-CTRL + E ukuba uqale ngokuzenzakalelayo izinjini nge-Fly By Wire imodi "EMINYANGWENI YOMTHETHO".
IZIMBUZO EZIKHONA: Uma i-Overhead iphaneli ingabonisi, khona-ke udinga i-FSX-SP2. Wonke amapaneli adinga okungenani i-FSX-SP2 noma i-FSX-Acceleration noma i-FSX Steam Edition noma i-Prepar3D ...
Uma indiza yakho ingaqali ekubandeni okubandayo nobumnyama noma uma izinjini zivale ngokushesha ngemva kokuphuma, lokhu kungenxa yokuthi indiza yakho yokuzenzakalelayo iyindiza ye-FSX yokuzenzakalelayo yangempela, ne-ULM, ehamba ngezinyawo "echwebeni likaLwesihlanu".
Ukuze uxazulule le nkinga, kufanele nje udale indiza, ngezindiza ozikhethelayo, kanye nesikhumbuzo sezindiza ozikhethelayo, lapho isikhala esithwalayo sivala zonke izinhlelo zale ndege (izinjini, ibhethri, ukushisa) futhi ulondoloze indiza ngokuhlola ibhokisi lokuhlola ku-"Londoloza indiza" iwindi elibizwa ngokuthi "yenza le indiza ezenzakalelayo".
Bese ushiye i-FSX.
Vula ifayela FSX.CFG (nge-Notepad) elise:
Uma u-Vista noma i-Seven noma i-Windows 10 "C: - Abasebenzisi - igama lomsebenzisi - I-App Data - Ukuzulazula - i-Microsoft - FSX"
uma use-Windows XP "C: - Amadokhumenti nezilungiselelo - igama lomsebenzisi - Idatha yohlelo lokusebenza - i-Microsoft - FSX"
Engxenyeni ye- [MAIN], engeza umugqa: KhubazaPhinde ulayishe = 1
Qala kabusha i-FSX, inkinga ilungiswe.
Uhlu lokulungiswa ngemodeli:
ZaseScandinavia Airlines - livery Retro
I-United Airlines (i-Pre & Post Merger Livery)
Airbus A320 Family Mega Pack FSX & P3D Inguqulo 3.05 Thwebula
Incazelo 18 148
Incazelo 28 147
Incazelo 49 624
Incazelo 58 213
Incazelo 148 730
Incazelo 22 972
Incazelo 28 625
Incazelo 23 294